အကောင်းဆုံးလှိမ့်ထုတ်လွှတ်ဖြန့်ဖြူး | Linux မှ
ထံမှဆောင်းပါးအဟောင်းကိုဖတ်နေ FromLinuxငါထင်တာကစာရင်းတခုကိုမင်းနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် အကောင်းဆုံး ဖြန့်ဝေ GNU / Linux «လှိမ့်ဖြန့်ချိ"။
သငျသညျ "လှိမ့်လွှတ်ပေးရန်" distro ကဘာလဲဆိုတာမသိရသလား? ဖြတ်သန်းပါ ရှာတွေ့သည်.
1 "လှိမ့်ထုတ်လွှတ်ပေး" ဖြန့်ဝေဘာတွေလဲ?
3 အကောင်းဆုံး "Pseudo လှိမ့်လွှတ်ပေးရန်" ဖြန့်ဝေ
Rolling Release အကြောင်းအနည်းငယ်သာနားလည်ရန် Ubuntu ကိုဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကြည့်ကြစို့ (၎င်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်မရှိပါ) Ubuntu သည် ၆ လတစ်ကြိမ်ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထိုအချိန်ကာလ၌၊ နောက် version အတွက်မာရသွန်အစုအသစ်များကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းရှိသဖြင့်ပြproblemsနာသုံးခုကိုတင်ပြနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ repositories ကို6လတိုင်းပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့် versionitis syndrome ရောဂါခံစားနေရသူများဖြစ်သော်လည်းအများအားဖြင့်ခြစ်ရာများမှသန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်ရန်အမြဲအကြံပြုသည်။
ဤသည်ကိုတိတိကျကျပြန့်နှံ့နေသောဖြန့်ချိသောဖြန့်ချိမှုများကဖြေရှင်းသည်။ Archlinux ကိုဥပမာအနေနဲ့ယူကြပါစို့။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် Archlinux ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် install လုပ်ပြီး၎င်းစနစ်သည်အလွန်လေးနက်သောပြproblemနာမရှိပါကဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသောအခါပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်လိုအပ်သည့် package များအားလုံးကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် ၄ င်းတို့ကိုဗားရှင်းအသစ်များအနေဖြင့်အသစ်ပြောင်းသည်နှင့်အမျှ Kernel ကဲ့သို့သောစနစ်အထုပ်များအပါအဝင် repositories မှသာ၎င်းတို့ကို update လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သင့်တွင်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာသင့်တွင်ပိုလန်သောဆော့ဖ်ဝဲများ၊ အမှားအယွင်းများနည်းပါးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ )
packages အသစ်များရရှိရန်အတွက် system ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည် Linux အတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။ ဖြန့်ချိချက်အမြောက်အများသည် ၆ လတစ်ကြိမ်ဗားရှင်းအသစ်များကိုထုတ်လွှတ်သောကြောင့် (အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်) ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်မှာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွေရှိပေမယ့်၊ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကအနည်းဆုံးစမ်းသပ်ခံရတဲ့ဗားရှင်းတွေ (အထူးသဖြင့်တခြားသူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါ) ဖြစ်လို့ပါ။
အကယ်၍ ဖြန့်ဖြူးမှုသည် updates များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါက .iso သည် installation ပြီးပါက distro installation အဆုံးတွင် package များစွာကို update လုပ်ရပါလိမ့်မည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစင်ကြယ်သောလှိမ့်ထုတ်လွှတ်မှုများကိုအခြေခံအားဖြင့် Arch နှင့် Gentoo2distros မှရရှိသည်။
Arch Linux ကိုအလွန်အမင်းအသိအမှတ်ပြုခံရပြီး၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအသိုင်းအဝိုင်းအကြားတွင်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းတို့ကြောင့်၎င်း၏ package များကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့အလျင်မြန်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Arch bang, Arch ကိုအခြေခံပြီး Crunchbang (Debian ကိုအခြေခံထားတဲ့နောက်ထပ် distro တစ်ခုဖြစ်ပြီး Openbox ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကအရမ်းပေါ့ပါးတယ်) မှလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အမြင်အာရုံနဲ့အခြေခံထားတယ်။
ParabolaArch Linux ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ဖို့ကြိုးစားပါ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း (FSF) မှအကြံပြုသည့်ဖြန့်ဝြေခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gentooinstall လုပ်ရန်ခက်ခဲပြီးလက်ခံမှုတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာသော distro၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဒီတစ်ခါလည်းကနည်းနည်းဆင်းပြေးပါတယ်။
Sabayon Linux, Gentoo မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေမယ့်အနည်းငယ်သာယာသောလေထုနှင့်အတူ။
Foresight ဘယ်ဟာက, rPath-based distro (ဖြစ်ခဲ့သော) ရပ်စဲခဲ့သည်) ။ Conary package စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် package များအားလုံးကို update လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် packet များထဲမှဖိုင်များကိုသာ update လုပ်သည်။ ၎င်းသည် packets တစ်ခုလုံးကို download လုပ်သော RPM နှင့် Deb ကဲ့သို့သောအခြား format များနှင့်မတူဘဲ။
အကောင်းဆုံး "Pseudo လှိမ့်လွှတ်ပေးရန်" ဖြန့်ဝေ
"Pseudo-rolling release" distros ဆိုတာမိဘဖြန့်ချိမှုကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ချိခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုကျင့်သုံးပြီးနောက်၎င်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအပိုင်းတွင်၊ ၎င်းတို့သည်အားလုံးသည် Debian Testing repositories ကို အသုံးပြု၍ Debian မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Linux Mint Debian ထုတ်ဝေမှုLMDE ဟုလူသိများသော Debian Testing သည် Linux Mint (GNOME 2, MATE / Cinnamon သို့မဟုတ် XFCE) ၏အမြင်အာရုံပါသည့်အခြေပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Aptosidယခင်က sidux ဟုလူသိများသည် Debian Testing ကိုအခြေခံသည်။
antixDebian Testing နှင့် Mepis ကို အခြေခံ၍ Linux ဖြန့်ဖြူးသည်၊ မြန်သည်၊ မြန်သည်၊ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
တော့ openSUSE၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိမှုဖြန့်ဖြူးခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Tumbleweed repositories ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
အရင်းအမြစ်: Linux မှ & COM-SL & as လိယ Brasa
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံးလှိမ့်ထုတ်လွှတ်ဖြန့်ဖြူး
Sebastian Varela Valencia ဟုသူကပြောသည်
Debian « Testing »: '(ဒါကိုသူတို့စာရင်းထဲမှာမဖော်ပြထားဘူး။ ) သင်ဘယ်လိုမေ့သွားမှာလဲ။
Sebastian Varela Valencia ကိုပြန်ပြောပါ
Gentoo sloppy?, ငါ distro ၏အာရုံသည်အသုံးပြုသူနှင့်အဆင်ပြေရန်မဟုတ်ဘဲသင်လုပ်ချင်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကိရိယာအားလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။
လုံးဝသဘောတူ, portage အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Archlinux သည်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်ရာကိုအလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာသေးမီကရုန်းကန်ခဲ့ရသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစနစ်ကိုပိတ်ခြင်း၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်စူပါ console အသုံးပြုသူများဖြစ်ခြင်းကြောင့်သော်လည်း၎င်းစတိုင်၏ distro ရှိခြင်းအတွက်ငွေပေးချေမှုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အဆင်ပြေပါသည်။ မင်းမှာ debian sid လည်းမရှိဘူး၊ ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဒီဗားရှင်းနဲ့ပြည့်နေလိမ့်မယ်။
Juan El Magníficoကိုပြန်ပြောပါ
Conary / Rpath အားရပ်ဆိုင်းခြင်းမရှိပါ။ Foresight Rpath အပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်, conary သာအသုံးပြုသည်။
နောက်ဆုံး conary ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Debian sid ကိုသယ်သွားတာနဲ့တူတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါက tumbleweed repos ကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ သူတို့ကပိုတည်ငြိမ်တယ်။
ငါ Arch + KDE ကိုတစ်နှစ်အသုံးပြုပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး။ Gnome 1 မှာလည်းသုံးခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် Debian sid ကို LTS တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်မစဉ်းစားပါ။
Rolling Releases ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုက်တယ်
၂) OpenSuse (tumbleweed)
http://blogs.conary.com/index.php/conarynews -> rpath အားဖြင့်နောက်ဆုံး conary update ကို: ဇွန်လ4။ Distrowach နှင့်ဤအပို distros များတလျှောက်ရပါဘူး
ငါသိသလောက် aptosid သည်ဌာနခွဲနှစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Testing နှင့် Sid ကို aptosid လက်စွဲ၏ပထမစာပိုဒ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။http://manual.aptosid.com/es/welcome-es.htm) ။ ငါတစ်နှစ်ကြာသည်နှင့်အညီသင်သည်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာကာ aptosid အချက်ပြဖိုရမ်များသို့လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် dist-upgrade တွင်သတိထားရမည်။ သူတို့ကသင့်ကိုထိုတွင်ရှိစေ။ အဆင့်မြှင့်တင်စဉ်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြproblemsနာများအားသင့်အားအသိပေးရန်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်လည်းနီးကပ်နေပြီ။
Slackware လား? ဟုသူကပြောသည်
Slackware မှ reply?
ငါမတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ရန်ရှိသည် ဗားရှင်း၊ Arch မှကျွန်ုပ်သည်“ အပြည့်အဝ” linux အသုံးပြုသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Arch ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က install လုပ်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည် anything နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများအားလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒါကသင်အများကြီးဖတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြံပြုခဲ့တဲ့ Distrowatch စာမျက်နှာမှာပြောထားတာပဲ။
Rubén Rivera Jáuregui ဟုသူကပြောသည်
ငါသုံးတဲ့တစ်ခုမှာ PCLinuxOS ဖြစ်သည်
Rubén Rivera Jáureguiကိုစာပြန်ပါ
Chakra ဟာတစိတ်တပိုင်းသာရွေ့လျားနေသည်။ လှိမ့်မဟုတ်သော packages များအချို့သော core ကိုရှိပါသည်။
သင်တန်း openSUSE tumbleweed ။ သို့သော် openSUSE စက်ရုံသည်ထုတ်လွှတ်မှုသက်သက်မဟုတ်ပါလား။
ငါသဘောတူတယ်။ ; P
Giorgio grappa ဟုသူကပြောသည်
Asus EeePC မှာ antiX ကို pseudo-rolling ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပေမယ့်သူ့ရဲ့ပေါ့ပါးမှုအတွက် (၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ solid unit ၏ 4GB တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့် distros အနည်းငယ်မှတစ်ခုဖြစ်သည်); ယခုတွင်မူကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သောကြောင့်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းသည် Debian ကိုအခြေခံထားသောကြောင့် Ubuntu တွင်အသုံးပြုသောသူများအတွက်အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
Giorgio Grappa အားပြန်ပြောပါ
အစဉ်မပြတ်ငါကဲ့သို့သော distro ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တ ဦး တည်းမတည်မငြိမ်ပျော့ရှိသည်ဖို့ဘဏ်ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ distro တစ်ခုစီသည် "rolling repository" ကိုဖွင့်လျှင်ဥပမာအားဖြင့် Ubuntu / Mint တွင်တည်ငြိမ်သော version ရှိသည့် update လုပ်ထားသောနေ့စဉ် software အချို့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ LTS” ကိုသုံးသောကြောင့်ဘရောင်ဇာမရှိတော့ပါ (Ubuntu 8.04 LTS: D ကိုသုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်) သည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ခေတ်နောက်ကျသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်အခြားဆက်သွယ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ရုံးဆော့ဝဲလ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ တတိယပါတီ၏ repositories မှလိုင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်တူညီသော distro သို့သော်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများမှ "source.lst ကို patching" မလုပ်ပဲ၊ ငါပြောသောအရာကိုလက်ရှိ repos နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ထင်ပေမယ့်သဟဇာတပconflictsိပက္ခများကိုရှောင်ရှားရန်, တူညီတဲ့ distro အားဖြင့်ဒီခုံတန်းလျားထက်သာ။ ကောင်း၏;)
ကျွန်ုပ်သည် hahaha: D: D ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းဝန်ခံသည်၊ သို့သော်ငါအမြဲတမ်း Rolling Release နှင့် LTS တို့တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော hybrid distro ရှိလိုသည်။ ထက်ဝက်ရှုပ်ထွေးညာဘက်?
တည်ငြိမ်သောနှင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသောအရာများကိုဖိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ရောနှောရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်သင်ဘာမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်ကို Gentoo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အထုပ်။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်၊
* ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ရှိစေလိုသည် (ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ် Firefox နှင့် QuiteRSS နှင့်သာပြုလုပ်သည်) ။
* တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီ (Metasploit, Wine နှင့်အချို့သောပရိုဂရမ်များကဲ့သို့)
တရားဝင်တည်ရှိရာပင် (Skype နှင့် "Frets On Fire") တွင်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမရှိပါသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်မရှိပါ။
* မတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းသည်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် (ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုးဖြစ်ခဲသော်လည်း၊ MenuLibre နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကို install လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်မဖွင့်နိုင်သော်လည်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကိုကောင်းမွန်စွာကြိုးစားသည့်အခါ)
ငါပြောသောအရာကိုစစ်ဆေးရန် ဒီမှာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအစီအစဉ်များကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
နှင့် Third-party repositories ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် (Gentoo တွင်သူတို့ကို overlays ဟုခေါ်သည်) ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရှိသည် လူပြိန်း။ "sudo layman -a repository_name" ခလုတ်ကိုသာရေးပြီးပုံမှန်အတိုင်း program မှထည့်သွင်းပါ။
LMDE သည်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားဖူးသမျှအဆိုးရွားဆုံးသောဖြန့်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ငါကဖော်ရွေလှိမ့်လွှတ်ပေးရန်ရှာနေကထံသို့လာ။ , သူက fiasco ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများသည်ရောက်ရှိရန်အချိန်အကြာကြီးရှိပြီးသူတို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် graphical environment ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောအမှားများစွာရှိနေသေးသည်။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး, ငါတို့ကဒီ distros ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုစမ်းသပ်သွားကြသည်။
ထိုအ Chakra ကော ??????
ကျွန်တော့်အတွက် (ဗားရှင်းရောဂါခံစားနေရတာဖြစ်လို့) Archlinux ထက်ပိုကောင်းတာဘာမှမရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရိုဂရမ်းမင်းအတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်း gcc နဲ့အခြားမွမ်းမံထားသောစာကြည့်တိုက်များကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်လိုချင်တာနဲ့လိုချင်တာကိုသာရရှိခြင်းတို့ပဲ။
Debian Testing သည်မလှည့်ပါ။ Chakra ကဲ့သို့တဝက်လှိမ့်နေသည်
အဲ့တာမှန်တယ်! ငါ Debian စမ်းသပ်ခြင်းပျောက်နေတယ်။ 🙂
Chakra linux ဘယ်မှာထားခဲ့ကြတာလဲ။ အရာ 15 လူကြိုက်အများဆုံး distros အကြားဖြစ်ပါတယ်
ငါပဲထွက်စတင်နေသောငါတို့ကိုသူတို့အဘို့မြင်သောပြproblemနာကဤလှိမ့အသိပညာတွေအများကြီးလိုအပျကွောငျးဖွစျသညျလာ။ နှင့် W $ အတူကြီးပြင်းလာသူကိုငါ့အဘို့, ငါ့အမှု၌ရှိသကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, ငါ Arch နှင့် Sabanyon install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေ, LMDE အကြောင်းကိုအများကြီးရှိပါတယ် ကျွန်တော် Linux ပျက်သွားတယ်၊ LinuxMint 14 KDE နဲ့နေခဲ့တယ်။ Pear Linux, ROSA နဲ့ Fuduntu (netbook အတွက်) ကိုတကယ်ကြိုက်တယ်။
မင်းရဲ့စာနာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝီကီပီးဒီးယားတွင်လည်းမှားနေသည်။ http://es.wikipedia.org/wiki/Foresight_Linux
ရပ်တန့်မထားပါ !!!!!!! ကျွန်ုပ်သည် distro ၏အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏မွမ်းမံမှုများနှင့်ဖိုရမ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံမှုရှိသည် !!!
ဟယ်လို? Debian အခြေပြု Foresight ?????? အကယ်၍ သင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုအနည်းဆုံး၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး distrowatch တွင်သတင်းပို့ပါက၎င်းသည် rpatch linux ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
Arch ကိုအခြေခံပြီး ANTERGOS (ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအားလုံးတွင်သုံးသည်) ကိုမမေ့ပါနှင့်၊ ငါမှတ်မိတော့မည်မဟုတ်သော Debian အနကျအဓိပ်ပါယျစတိုင်၌ရိုးရှင်းသောဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းသူနှင့်အတူ အကယ်၍ သင်စမ်းကြည့်ပါကသင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်။ အရောင်များကိုမြည်းစမ်းရန်။
Gerardo Cortegoso González ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းဆိုးတဲ့ဆောင်းပါး၊ မင်းပြောနေတာကိုမင်းမသိဘူး နည်းနည်းစမ်းသပ်ပြီးလား ငါသိသလောက်တည်ငြိမ်ပြီး၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောဌာနခွဲတစ်ခုတည်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တူညီသော distro တွင်ရှိသည်၊ ၎င်း၏ထိပ်တွင် Manjaro ကိုသင်မဖော်ပြပါ။ Antergos, Kaos ... NI PUTA IDEA !!
Gerardo Cortegoso Gonzálezအားပြန်ပြောပါ
Xubuntu 12.10 အတွက် GreyBird Gtk Theme ကို Update လုပ်သည်
Dummies III အတွက် Linux ။ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်။